El Pajarcillo Rural House
Moriana, CL, Spain
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguFeli
Indlu yasemaphandleni enomtsalane 2 amagumbi okulala, igumbi lokuhlambela eli-1, abantu aba-4 + umntwana o-1 ongaphantsi kweminyaka emi-2. Ukupaka kunye neWifi yasimahla.
Ukujonga i-Obarenes, le Pajarcillo endala ikwidolophu encinci apho unokwenza khona iindlela okanye ujabulele indawo ezolileyo.
Kufuneka kuqatshelwe eyona ndawo ibalaseleyo kwidolophu encinci nethuleyo yaseBurgos enembono entle yeentaba zeObarenes. Ukusuka apha unokwenza iindlela ngezi ndawo zendalo okanye ukhenketho ngokuqhuba umgama omfutshane kwiidolophu ezinembali kule mimandla:
Umgama nje oyi-2.9 km ukusuka kwidolophu eyimbali yaseSanta Gadea del Cid.
Kwiikhilomitha ezi-5 yi-Monasterio del Espino, indawo yomtshato kunye neziganeko.
Kwiikhilomitha ezi-5 iindawo zokutyela ezimbini ezaziwa kakhulu eziku-N-1: El Restaurante Monumento al Pastor kunye neRestaurant El Molino.
Iikhilomitha ezili-9 ukusuka kwidolophu entle yasePancorbo.
Kwiikhilomitha ezili-12 idolophu yaseMiranda de Ebro kunye nazo zonke iinkonzo kunye nokuzonwabisa ukuba isixeko esinobukhulu baso sinokunikezela
Kufutshane kakhulu endlwini evela km 26 ukuba uthotho kwiidolophu e La Rioja, Cuzcurrita, Tirgo, Casalarreina, Haro, Laguardia kunye La Bastida (Rioja Álavesa) efikelela eLogroño ngo-57 imizuzu, newayini, iiwayini, ubume kunye nenkcubeko ukuze yonwabele.
Imizuzu engama-38 ngemoto iVitoria, ikomkhulu lelizwe laseBasque, eneendawo ezininzi zokutyelela kunye nabo bonke ubuncwane bayo; Idolophu endala, iSanta María Cathedral, iimyuziyam, iipaki, udonga, igastronomy ...
Ngemizuzu nje ye-50 ngendlela Isixeko saseBurgos "I-Capital yeGothic", enezinto ezintathu zelifa lehlabathi: iCathedral, iCamino de Santiago kunye neAtapuerca.
Kwelinye inqanaba kunye nomtsalane omkhulu, ndincoma kakhulu iindawo ezintathu ezikufutshane: Idolophu edumileyo yabakhenkethi yaseOña kunye nemonki yaseSan Salvador, ekwimizuzu engama-35 kude. UFrías "Esona sixeko sinomtsalane samaxesha aphakathi" esinobuhle obuphindaphindiweyo kunye namabhaso okhenketho, eqaqambisa idolophu yayo yakudala kunye nenqaba yayo yaseVelasco, ekwimizuzu engama-36 kude kunye nePoza de la Sal edumileyo kumgama nje wemizuzu engama-39.
Idolophu ezolileyo yaseBurgos, enabamelwane abambalwa kunye noopopayi abaninzi ngexesha leholide.
Umbuki zindwendwe ngu- Feli
Indawo yokuhlala yenzelwe abantu be-4 nangona kuyinyani ukuba inomatrasi (ngaphandle kwentlawulo) enokusetyenziswa ngumntu wesithathu (ngokukhethekileyo umntwana) kwigumbi le-bunk.
Inombolo yomthetho: CR-09/695
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moriana